YEYINTNGE(CANADA): Friday, February 18
18 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2643K View Download
18 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
3092K View Download
18 Feb 2011 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/18/20112အကြံပြုခြင်း
အခုတပတ် လူထုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်မှာတော့ `၈-၈-၈၈မှ ၁၈-၉-၈၈ အကြား ဖြစ်ပျက်မှုများကြောင့် ဒီမိုကရေစီ မဖြစ်ပေါ်လာဘူး ဆိုပေမဲ့လည်း အပြောင်းအလဲ မဖြစ်ဘူးလို့တော့ ပြောလို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ၈၈ မတိုင်မီက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ၈၈ နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ အတော် ကွာခြားတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အပြောင်းအလဲမျိုးဖြစ်ဖို့ ဆိုတာက စနစ်တကျ ဝီရိယအပြည့်နဲ့ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သောတရှင်တဦးကို ဖြေကြားထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ NLD ဌာနချုပ်ရုံးတွင် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် ၆၄ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားတွင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း ပြောကြားစဉ်။ (Screen Shot from YouTube)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/18/20110အကြံပြုခြင်း
” မြန်မာ တွေ ဆန္ဒပြ ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေနည်း “ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သုံးသပ်
၊အရှေ့ အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများ သာမက ဥရောပနိုင်ငံအချို့ ၊တောင်အမေရိကတိုက် နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်နယ် အချို့ တွင် ပါ လူထု အုံကြွမှု များ
ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံ ထိုကဲ့သို့ အားကောင်းသော လူထု အုံကြွမှု များပေါ်ပေါက် နိုင်ခြင်း မရှိ ဟု ယမန် နေ့ က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် နအဖ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် များ အစည်းအဝေး တွင် ပြောကြား ခဲ့သည် ဟုFreedom NewsGroup မှ သိရှိရသည်။
အကယ်၍ နိုင်ငံတကာဖြစ်ပေါ် နေသော အခြေအနေ များ မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ကူးစက်လာလျှင်ချက်ခြင်း လက်တုံ့ပြန်သွားရန် အတွက် အစီအစဉ် များ ရေးဆွဲ သည့် ထို အစည်းအဝေးပွဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး က ရန်ကုန် တိုင်းတိုင်းမှုး ဗိုလ်မှုးချုပ် ထွန်း သန်း နှင့် အိမ်မီးလောင်၍
“၀ါယာ ရှောခ် ” ဟုနာမည် တွင် သည့် မန္တလေး တိုင်းမှုး ဗိုလ်မှုး ချုပ် ရဲ အောင် တို့ အားအထက်ပါ အတိုင်း ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အစည်း အဝေး တွင် ဒု ဗခမက မောင်အေး လည်း ရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြောင့် မည်သည့် လူထု အုံကြွမှု မှ မပေါ်ပေါက် နိုင်ဟု သုံးသပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစည်း အဝေး သို့ တက်ရောက် ခဲ့သည်. ဗိုလ်ချုပ် အဆင့် ရှိသူတစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောပြရာတွင် “အဖိုးကြီး နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေး က တ၀ါးဝါး ပြောရင်း ပွဲ ကျနေကြတာ သူတို့ ပြောတဲ့ ထဲ မှာ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တုန်း က အကြောင်း တွေ လဲ ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ရှေ့ သံဃာတွေ ဖြတ်လျှောက် တော့ သူတို့ လန့် လန့် နေတယ်။ ဒေါ်စုက ထွက်ပြီးပြည်သူ ကို ဦးဆောင် ရင် သူ တို့ သွား ပြီ လို့ ထင်တားတာ ၊ နောက် လက်အုပ်ကလေး ချီပြီး ပြန်ဝင်သွားတော့ မှ သူတို့ ဖြိုခွင်ဖို့ ကို ချက်ခြင်း စီစဉ် ပြီး ဘုန်းကီးကျောင်းတွေ ကို ၀င်စီး ၊ ဆန္ဒပြ သူတွေ ကို လုပ်တာ လို့ ” ပြောခဲ့စသည် ဟုအဆိုပါ ဗိုလ်ချုပ်က ပြောသည်။
ယမန် နေ့ က ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေး တွင် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင် လှိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို လည်း တက်ရောက်ပြီး လွှတ်တော်တက် နေသည့် ကြံဖြွတ် ကိုယ်စား ပြု စစ်ဗိုလ် တစ်ဦး တစ်ယောက်မျှ ပါရှိခြင်း မရှိ ဟု သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ၏ လူထု အုံကြွမှု ပေါ်ပေါက် နိုင်ခြင်း မရှိ သည့် ခန် မှန်းချက် နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန် မြို့ မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်း လူငယ် စာရေးဆရာတစ်ဦးက ” ချက်ခြင်း တော့ မပေါ် နိုင်သေးဘူး ၊ အခု မှ လူငယ်တွေက အား ပြန်စု တုံး ဆိုတော့ မိုးတွင်း လောက်မှ ဖြစ်နိုင်တယ် ထင်တယ် “ဟုသုံးသပ်သည်။
ယနေ့ အမေရိကန် နိုင်ငံ ၀စ္စကွန် ဆင် ပြည် နယ် ဉ် ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး၏ ၀န်ထမ်း လစာများ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေကြမ်း တစ်ခု ကို မကျေနပ်ရာ မှ ဆရာ များ နှင့် ကျောင်းသား ပြည်သူ များက ဆန္ဒပြကြ ရာ ပြည်နယ်အုပ် ချုပ်ရေးမှုး စကော့ ဝေါ်လ် ကာမှာ ရေအိမ် မှ တစ်ဆင့် ထွက်ပြေးခဲ့ ရသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/18/2011 1 အကြံပြုခြင်း
DASSK's Speech for 64th UNION DAY ,Japan
(Ottawa) – Carleton University will award an honorary doctorate to Nobel Peace Prize Laureate Aung San Suu Kyi ataspecial ceremony on Feb. 22.
A Doctor of Laws honoris causa will be awarded in absentia ataceremony highlighted byaspeech from the Hon. Flora MacDonald,aformer Conservative MP who has devoted her post-political career to international humanitarian work and has met Ms. Suu Kyi.
When: Tuesday, Feb. 22, 2011, at noon.
Where: Kailash Mital Theatre, Carleton University.
Parking: P1 off Library Road
A map of the campus can be found here: http://www1.carleton.ca/campus/
The public is invited to attend but please RSVP to events_office@carleton.ca
or call (613) 520-2948 with your name, affiliation and phone number
Aung San Suu Kyi, Myanmar’s pro-democracy leader andaNobel Peace Prize winner, has become an international symbol of peaceful resistance in the Asian country formerly known as Burma.
She was born in June 1945 in Rangoon. Her father, General Aung San, negotiated Burma’s independence from the British Empire in 1947 but was assassinated by his rivals that same year.
After living abroad for many years, Ms. Suu Kyi returned to Burma in 1988 to care for her critically ill mother and helped found the National League of Democracy to focus the revolt against then-dictator General Ne Win.
Her party won national elections in May 1990 but the junta refused to hand over control.
She has spent most of the last 20 years in some form of detention because of her efforts to bring democracy to the military-ruled nation.
She was finally released on Nov. 13, 2010 after another set of elections that left military-backed parties in control.
Aung San Suu Kyi has won numerous international awards, including the Rafto Human Rights Prize (1990), the Nobel Peace Prize (1991), the Sakharov Prize for Freedom of Thought (1990) from the European Parliament and the United States Presidential Medal of Freedom (2000).
She was also awarded the Jawaharlal Nehru Award for her promotion of international understanding, goodwill and friendship among peoples of the world by the government of India.
In 2007, the Canadian government made her an honorary Canadian citizen, one of only five people to ever receive the honour.
She is the author of several books, including Freedom from Fear and Other Writings (1995), The Voice of Hope (1998), Letters From Burma (1998), Aung San of Burma: A Biological Portrait by His Daughter (1991) and Burma’s Revolution of the Spirit: The Struggle for Democratic Freedom and Dignity (1994).
” မြန်မာ တွေ ဆန္ဒပြ ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေနည်း “ဟု ဗိုလ်...